Boqor Burhaan: “Ma aqbalayno in la joojiyo gudniinka Suniga” – VIDEO - Bulsho News
Horyaalka Kubada Cagta Puntland Oo Laga Daahfuray Magaalada Garoowe
Hay’adda Gaalkacyo Eduction Center Oo Tartan U Qabatay Qaxootiga Iyo...
Boqor Burhaan Boqor Muuse oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar, ayaa si kulul uga hadlay xeerka joojinta gudniinka gabdhaha oo ay dhowaan ansixiyeen golaha wasiirada Puntland.
Boqorka ayaa sheegay inay talaabadani tahay mid aan laga aamusi karin, dhaawacna u geysanaysa diinta islaamka, isla markaana cidna uga habaysan doonin wax walba oo khilaafaya diinta.
” Anagu mujtamaca iyo umadda wixii wanaageeda ah oo diinteeda ay ku badbaadi kadho, cidna uga haybaysan mayno diyaar baanu u nahay af iyo addinba inaanu kaga hornimaadno, mana aqbalayno “.
Boqorka ayaa intaas ku daray xukuumada Puntland inaysan isku mashquulin wax aanan u suurtagalayn maadaama sharcigani lid ku yahay qanuunkii ilaahey.
” Waxaa laga hortagay oo waqti badan la geliyey gudniinkii fircowniga ahaa waxay ahayd arrin culimo iyo maamul iyo dowlado kuliba la iska kaashaday, in hadana loosoo gudbo sunigii iyo arrinkii ilaahey weyne ahaa iyo rasuulkiisa, waa wax aan soconayn. Waxaa idinka maamul ahaan wax idiinka soconaynna inaad wakhti badan ku lumisaan maaha…”
Sidoo kale Boqor Burhaan ayaa golaha wakiilada Puntland ugu baaqay inay laalaan sharcigan, wuxuuna ugu danbayn boqorku u mahadceliyey culimada Puntland oo cambaareeyey talaabadan.
Xal ma laga gaari karaa is-maandhaafka u dhexeeya...
Sawirro: Maxaa looga hadlay kulankii maanta ka dhacay...
Shiinaha oo malaayiin dollar ugu deeqay Afghanistan
Cumar Cabdirashiid: Xaaladda kacsan ee Muqdisho cawaaqib xumo...
Apple, Google raise new concerns by yanking Russian...
Dib u dhac ku yimid soo xulista Ergada...
UK borders bill could criminalise Afghan refugees, UN...
UK counts on vaccines, ‘common sense’ to keep...
Madaxweyne Guudlaawe Oo Muqdisho Lagu Soo Dhoweeyey